Dowladda Itoobiya oo loogu baaqay iney kala dirto ciidamada loo yaqaan Liyu booliis iyo Cabdi Iley oo cir iyo dhulkaba laga nacay. – Xeernews24
Dowladda Itoobiya oo loogu baaqay iney kala dirto ciidamada loo yaqaan Liyu booliis iyo Cabdi Iley oo cir iyo dhulkaba laga nacay.
Hay’adda caalamiga ah ee xuquuql insaanka ayaa ugu baaqday dowladda Itoobiya in ay sidda ugu dhaqsiyaha badan ay u kala dirto ciidamada Liyu booliiska ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ka amar qaada Cabdi Iley oo hor joogge uga dhulka Soomaalida Itoobia.
Warbixin dheer oo ay maanta soo saartay hay’adda Amnesty International ayaa lagu sheegay in ciidamada Liyu booliiska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay si sharci daro ah u laayeen dadka gobolka dariska la ah ee Oromia .
Xukuumadda Itoobiya waa in ay sidda ugu dhaqsiyaha badan u kala dirtaa ciidamada Liyu booliiska ayna ku badashaa booliis u hogaansamaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay warbixinta Amnesty war bixinta nuucan ah ayaa ah mid ku cusub dhegaha Soomaalida Itoobia oo Cabdi Iley ka sheegi jirey cabudhinta ka jirta dawlad deegaanka Soomaalida.
“Waa in aan loo ogolaan askartan in sidda ay doonaan ay dadka ugula dhaqmaan si arxan daro ah ayaa intaa lagu daray”.
Sidda ay sheegtay hay’adda Amnesty International xubnaha Liyuu booliiska ayaa toddobaadkan gubay 48 guri oo ay leeyihiin dadka Oramada kuwaasi oo ku noolaa deegaanka Soomaalida islamarkana lagu qasbay in ay u qaxaan Kiro oo ka tirsan gobolka Oramada.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/05/liyuu.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-05-31 23:39:292018-05-31 23:39:29Dowladda Itoobiya oo loogu baaqay iney kala dirto ciidamada loo yaqaan Liyu booliis iyo Cabdi Iley oo cir iyo dhulkaba laga nacay.
Ururka Samafalka ee Ramad oo indha-Indheeyey baaxada ay leedahay Musiibadi Duufaanti... WAR LAMA-FILAAN AH”Geelle oo shaaciyey inuu ka Badbaaday shirqool DP World...